Diinta Marooko | Safarka Absolut
Marooko waa wadan diin leh, sida ay CIA World Buugga Xaqiiqda, 99% dadka reer Morocco waa Muslimiin. Masiixiga waa diinta labaad ee ugu weyn wuxuuna ku sugnaa Marooko tan iyo intii uusan imaan Islaamka. Dalka waxaa ku yar yahuudda maadama badankood ay ku laabteen wadamada ku hareeraysan, iyada oo Israel ay qaabilayso Yuhuudda ugu badan ee soo laabatay. Sanadihii la soo dhaafay tirada dadka aan diinta lahayn ayaa ku soo badanayay Marooko.
1 Diinta Marooko qadiimiga ah
2 Bulsho islaam ah
3 Marooko casri ah
4 Diimaha iyo dadka laga tirada badan yahay ee diin laaweyaasha ah
5 Xuquuqda iyo xorriyaadka diinta ee Morocco
6 Islaam: diinta dawladda
Diinta Marooko qadiimiga ah
Wadanka, oo markii hore ay daganaayeen reer Berber, waxaa ku soo duulay marka hore Foosiyaaniyiin, waxaa ku xigay Carthaginians, markii dambena Roomaan. Yuhuudda ayaa ugu dheer taariikhda diimaha Morocco.
Joogitaankeedu wuxuu ka soo bilaabmay waqtiyadii Carthaginian ee 500 AD. Tiro badan oo Yuhuud ah ayaa yimid Marooko ka dib markii ay burburiyeen macbudkeedii labaad ee reer Baabili. Ku Masiixiyadda ayaa qaadatay xilliyadii Roomaaniga, iyo Yuhuuddu waxay la kulmeen takoorid ka timi masiixiga dowladdu taageerto xilligan.
Sannadkii 680 miilaadiga ayay carabtu dalka ku soo duushay, iyo dadka degganba waa way islaameen. Qulqulka labaad ee Yuhuudda ayaa yimid Marooko kadib Go’aanka Alhambra ee 1492, kaasoo ka saaray Spain.
Bulsho islaam ah
Sannadkii 680 miilaadiga, Umawiyiinta, koox Carab ah oo ka timid Dimishiq, ayaa ku soo duulay waqooyi-galbeed Afrika, iyagoo islaamka la yimid. Waqti ka dib Berber-kii asalka ahaa ee soo islaamay wuxuu kordhay inuu ahaado 788 AD, markii Idiris I oo ka tirsan Zaydi ee caqiidada Shiicada uu aasaasay kii ugu horeeyay Boqortooyada Islaamka ee Marooko.
Qarnigii XNUMXaad, Almoravids waxay aasaaseen boqortooyo ka kooban inta badan Marooko casri ah oo la sameeyay dugsiga Maaliki fiqiga, dugsi ka mid ah madhabka Sunniga, oo ku badan Morocco.
Marooko casri ah
Islaamku wuxuu ka adkaaday Marooko ilaa qarnigii XNUMXaad, boqortooyadii Calawiyiintuna waxay xaqiijineysaa Nabi Muxamed inuu yahay awoowe. Seddex meelood labo meel muslimiinta ku nool Marooko waxay ka tirsan yihiin Dariiqada Sunniga ah halka 30% ay yihiin muslimiin aan diin lahayn. Sunniyiinta waxay aaminsan yihiin in aabaha siyaasadeed uu ahaa Muxamed Abuu Bakar wuxuu ahaa khaliifkeedii ugu horreeyay.
Dhanka kale, ka shiico waxay u maleynayaan inuu ahaa cali bin Abi Daalib, wiilka uu sodoga u yahay iyo ina adeerkiis. Dugsiga Sunniyiinta ugu badan ee ku yaal Marooko waa malikiga fiqiga, oo ku tiirsan Qur'aanka iyo xadiiska oo ah ilaha aasaasiga ah ee wax lagu barto.
Diimaha iyo dadka laga tirada badan yahay ee diin laaweyaasha ah
Tirada Yuhuudda ku sugan Marooko aad ayey hoos ugu dhacday marka loo eego tirooyinkii la diiwaan geliyey xilliyadii hore. Aqlabiyad badan waxay u haajireen dalka Israel oo la aasaasay 1948. Qaarkood waxay u guureen Faransiiska iyo Canada.
Iimaanka Baha'i waxay ku leedahay inta u dhaxeysa 150 ilaa 500 oo raacsan Marooko. Diinta oo la aasaasay qarnigii 19aad waa mid tawxiid ah waxayna aaminsan tahay midnimada ruuxiga ah ee aadanaha oo dhan. Qaar ka mid ah reer Marooko waxay u aqoonsan yihiin kuwo aan diin lahayn, in kasta oo ay jiri karaan in ka badan inta ay sheegaan, hase yeeshee, maaddaama in badan oo ka mid ahi aaminsan yihiin inay ilaahnimadooda u xafidayaan qarsoodi iyagoo ka baqaya in la takooro, taas oo ka kooban waxa loo yaqaan masaafuriska siyaasadeed.
Xuquuqda iyo xorriyaadka diinta ee Morocco
In kasta oo dastuurkeedu siinayo Morocco waxay xor u tahay ku dhaqanka diinta Waxay rabaan, maaddaama xeerka ciqaabta ee waddanka uu ka kooban yahay dhowr sharci oo lagu takooro dadka aan Muslimka ahayn, tusaale ahaan: waa dambi in Marooko ay haysato Kitaabka Quduuska ah ee Masiixiyiinta oo ku qoran Carabi.
Sharcigan ayaa loogu talagalay mamnuuca diinta laga bilaabo muslimiinta carabta ilaa diin kale. Morocco waxay caan ku tahay wadamada carabta sumcadeeda islaamka ee dulqaadka leh. Dabeecadda dulqaadka ayaa sharxi karta soo jiidashada dalka ee dalxiisayaasha ka kala yimid adduunka oo idil. Waxay sidoo kale xisaabinaysaa xasaanadda uu u arkaayo waddanka inuu yahay xag-jirnimada diinta.
Islaam: diinta dawladda
Maanta Islaamku waa diinta dawladda Dastuur ahaan loo aasaasay boqorkuna wuxuu caddeeyay sharcinimadiisa inuu yahay madaxa dawladda iyo diinta - qayb ahaan, sharcinimadiisu waxay ku xidhan tahay sheegashada inuu ka dhashay Nebi Muxamed. Qiyaastii ⅔ dadku waa sunni halka 30% ay yihiin muslimiin aan diin lahayn. Dastuurku wuxuu xuquuq iyo ilaalin siinayaa Islaamka si ka duwan diimaha kale, oo ay ka mid tahay sharci darro in la isku dayo in qofka Muslimka ah loo beddelo diin kale.
Boqortooyada Marooko waa boqortooyo dastuuri ah oo baarlamaani ah oo leh dowlad la soo doortay. Boqorka haatan, King Mohammed VI, wuxuu ku fadhiyaa jago hogaamiyaha cilmaaniga ah ee siyaasadeed iyo "Amiirka Mu'miniinta" (qayb ka mid ah cinwaankiisa rasmiga ah) - sidaas darteed wuxuu leeyahay xoogaa awood fulineed oo ka tirsan laamaha sharci dejinta ee dowladda waana madaxa diinta ee gobolka iyadoo hoggaamiyeyaasha diimaha oo dhami ka hooseeyaan. ku ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Diinta Marooko
15 talooyin ku saabsan safarka Hindiya